घरमै यसरी बढाउन सकिन्छ अक्सिजन लेभल « Janata Samachar
काठमाडौं । पछिल्लो समय जटिल खालका कोभिड संक्रमितहरू बढ्दै गएका छन् । अस्पतालहरुमा बेड तथा अक्सिजन अभाव हुदा संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम भएका बिरामीले घरमै बसेर उपचार गर्नु उपर्युक्त हुने विज्ञहरु बताउछन् ।
कोरोना संक्रमितमा देखिने जटिल समस्यामध्ये अक्सिजन लेभल घट्नु एउटा मुख्य समस्या हो । अक्सिजनको लेभल घरैमा पनि नाप्न सकिन्छ ।
अक्सिजनको मात्रा कम भए नभएको जानकारी दिने अक्सिपल अक्सोमिटर भन्ने औँलामा च्याप्ने मेसिन हुन्छ । यो मेसिनले अक्सिजनको मात्रा देखाउँछ । कोभिड संक्रमितमा ९५ भन्दा कम देखायो भने अक्सिजनको मात्रा कम भएको मानिन्छ । तर, उपचार नै गर्नुपर्ने अवस्था भने ९२ भन्दा कम भएपछि मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीको उपचार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि अक्सिजनको मात्रा ९२ भन्दा तल भएको अवस्था छ भने सम्भव भएसम्म अस्पताल लैजानु राम्रो हुन्छ । तर बेड नपाएर अस्पताल जान पाइएन भने डेक्सामिटासुन ६ एमजीको औषधि दिन सकिने बिपी प्रतिष्ठान धरानका मुटु तथा मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. सञ्जीवकुमार शर्मा बताउनुहुन्छ ।
हुन त ठ्याक्कै ६ एमजीको ट्याब्लेट आउँदैन तर पोइन्ट ५ को ट्याब्लेट पाइन्छ । दिनको एउटाका दरले १२ वटा ट्याब्लेटसम्म खुवाउन सकिन्छ । तर यो औषधिले मधुमेहका बिरामीलाई भने असर गर्छ । यसले शरीरमा सुगरको मात्रा बढाउँछ । बोर्डरमा छ भने सुगर देखाउँछ । तर, सुगर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ।
औषधि प्रयोग गर्न नरुचाउनेका लागि अक्सिजनको मात्रा बढाउने अर्को उपाय पनि छ । आधा घन्टा घोप्टो परेर सुतेर पनि अक्सिजनको मात्रा बढाउन सकिन्छ । यसलाई योगको भाषामा ‘प्राउन पोसिजन’ भनिन्छ । अर्थात आधा घन्टा दाहिनेतिर घोप्टो परेर सुत्ने आधा घन्टा देब्रेतिर घोप्टो परेर सुत्दा पनि अक्सिजनको मात्र बढाउन सकिन्छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै
काठमाडौें । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा
राष्ट्रिय जनगणनाको पुनः तयारी : लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन ?
काठमाडौं । यदि देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा लगाउन नपरेको भए राष्ट्रिय जनगणना यतिखेर
गोरखा । गोरखाको बारपाकमा अक्सिजनको मिनीप्लाण्ट निर्माण सम्पन्न भएको छ । दैनिक ७० लिटर क्षमताको